ठमेलको यौन धन्दा कानुनी नियन्त्रण भन्दा बाहिर ,पढ्नुस कति सम्म घृणित कार्य हुन्छ ? – Complete Nepali News Portal
ठमेलको यौन धन्दा कानुनी नियन्त्रण भन्दा बाहिर ,पढ्नुस कति सम्म घृणित कार्य हुन्छ ?
December 12, 2016	578 Views
ती सञ्चालकले सोह्रखुट्टेबाट सरुवा भएका एक प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लाई त्यहीँ थमौति गर्न ५० हजार लगानी गरेको र अर्का सईलाई २५ हजार सापटी दिएको जानकारी आफ्नै साथीलाई दिएका छन् ।
सर्वसाधारणको बाक्लो ओहोरदोहोर हुने यो गल्लीमा अवैध गतिविधि सञ्चालन हुँदा अन्य रेस्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । रक्स बारमा लाग्ने ग्राहकको भीडले गल्ली नै दुर्गन्धित बनेको गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरूको छ । कतिपयले यस गल्लीलाई ‘बम्बे गल्ली’ समेत भन्ने गरेका छन् ।
गुल्मीकी चेलीको यो गितमा फेरी रोय नेपालीहरु (भिडियो)